Bezvtykovye पिस्टन "Priora": डिजाइन र विशेषताहरु
"LADA Priora" कार को मालिक अक्सर समस्या मा प्राप्त। भाँचिएको समय बेल्ट दुःखी नतिजा गर्न जान्छ। यो कुरा निर्माता इन्जिन भेला भएको बेला कारखाना सेट जो पिस्टन, अपर्याप्त नमूना गहिराई छ भन्ने छ। यी नमूनाहरू minders counterbore रूपमा उल्लेख छन्। यो विनाशको कारण हो। दुर्घटनामा यस्तो पछि मोटर मरम्मत कार मालिक महंगा छ खर्च हुनेछ। को "प्राथमिकता" गर्न पिस्टन bezvtykovye तथाकथित मा कर्मचारी प्रतिस्थापन गर्न सस्ता।
भौतिक काम पिस्टन, लोड
यो तत्व एक घूमएर गति मा इन्धन को विस्फोट र क्रैन्कशाफ्ट तिनीहरूलाई दिइरहनुभएको ऊर्जा रूपान्तरण गर्न डिजाइन गरिएको छ। जब ग्याँसहरु को विस्फोट विस्तार पछि पिस्टन र काम सतह यांत्रिक र थर्मल प्रभाव हो। विस्तार उच्च तीव्रता लोड अनुभव गरिरहेको छ। को "प्राथमिकता" इन्जिन मा अधिकतम सम्भव दबाव 65-80 पट्टी सम्म पुग्न सक्दैन। यसलाई व्यावहारिक केही टन छ। सञ्चालन मा, पिस्टन समय समयमा हुन सक्छ 100 मी / घन्टा वा बढी यसको आन्दोलन माथि बढाउने। साथै, आफ्नो आन्दोलन 200 हर्ट्ज 6000 मा Rev / मिनेट को एक आवृत्ति मा लगभग शून्य धीमा हुन सक्छ। को बैरल मा हावा र इन्धन मिश्रण exploding गर्दा, तापमान भित्र 1800-2600 डिग्री पुग्न सक्दैन। यस्तो तापमान प्रभाव अन्तर्गत बल विशेषताहरु कम छन्। त्यहाँ कारण आकस्मिक तापमान परिवर्तन गर्न थर्मल तनाव छन्। यो नै भोल्टेज प्रवेग र deceleration उच्च आवृत्तियों मा बेला दहन उत्पादन दबाब र inertia थप्न आवश्यक छ।
पिस्टन को कर्मचारी संरचना बारे
यस्तो अवस्थामा काम गर्न, वस्तु जहाँसम्म सम्भव, सजिलो, हुनुपर्छ। भौतिक - प्रतिरोधी लगाउन। साथै, मिश्र धातु उच्च थर्मल चालकता हुनुपर्छ। यो एक उच्च ठंडा दर सुनिश्चित गर्नेछ। वस्तु एक गरम सिलेंडर मा जाम छैन भनेर बाहिरी काम सतह गरिनु पर्छ। साथै, दहन उत्पादनहरु crankcase मा भित्र पस्नु हुँदैन। पिस्टन एक बैरल आकार, को काम भाग बीच ताप को डिग्री छ र यसको स्कर्ट ठूलो फरक छ। यो सम्भव सबै आवश्यकताहरू पूरा गर्न बनाउँछ। प्रक्रिया मा स्कर्ट को सम्भव विरूपण क्षतिपूर्ति गर्न, पिस्टन "protivoellipsom" बनाइएको छ। एउटा ठूलो भाग कडाई एक औंला माउन्ट लागि खन्नु अक्ष को अक्ष लम्ब छ।
पिस्टन टाउको वा यसको माथिल्लो भाग एक तल समावेश छ। हे-छल्ले माउन्ट लागि विशेष नाली पनि छ। माथिल्लो अंशमा उत्पादन मंच यो सुरक्षा कोटिंग को एक विशेष तह संग लेपित छ मा उच्च भार सामना गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ एउटा सानो कोण छ भनेर माउन्ट छल्ले लागि Grooves छन्। यो घन्टी को बाहिरी छेउको स्थान भित्री भन्दा उच्च छ सुनिश्चित गर्दछ। यो उच्च तापमान भार मा सञ्चालन समयमा तल नाली को क्रस-खण्ड को झुकाव रोक्छ। काम सतह मार्फत स्लाइड राम्रो पिस्टन विशेष कोटिंग्स संग उपचार छ प्रदान गर्न। राम्रो भाग burnished गर्न, यस्तो कोटिंग्स जो चलिरहेको समयमा थकित छन्, लागू छन्। यो टिन चढाना वा फस्फेट। सामाग्री, कागज, सञ्चालन अवधिको लागि सतह रहने। यो स्कर्ट cutters को माध्यम द्वारा प्रशोधन छ। यो एक माइक्रो-राहत प्राप्त गर्न गरिन्छ। यस कारण, तेल यसरी घर्षण कम, को workpiece सतह मा राम्रो खुलिरहेको छ।
"सुरक्षित" पिस्टन को डिजाइन "Priora" मा मतभेद
त्यसैले कर्मचारी को "प्राथमिकता" मा पिस्टन bezvtykovye फरक छैन। यो वास्तवमा "AvtoVAZ" बाट एक मानक पिस्टन इन्जिन को एक नक्कली छ। तर त्यहाँ परम्परागत दर्पण को शीर्ष मा - त्यहाँ गहिरो नमूना हो सट्टा। यो सम्भव भएको वाल्व र समय को विवरण र पिस्टन आफूलाई एउटा बैठक सुरक्षित बनाउँछ। आयाम र अन्य सबै मापदण्डहरु पूर्णतया मानक भागहरु को विशेषताहरु संग लगातार छन्।
किन nezavodskie पिस्टन सेट?
प्रत्येक वाहन मा व्यक्तिगत। पूरै इन्जिन मर्मतका को निर्माता को नियमहरु पालना भने, सिफारिस वा कम से कम गुणस्तर स्पेयर पार्ट्स र उपभोग्य स्थापित गर्न, त्यसपछि कार लामो र राम्रो, र सबै संयन्त्र र एकाइहरु यसको सामान्य मोड मा काम हुनेछ।
तर सबैलाई सुरक्षित गर्न वा कार ट्युनिङ गर्न चाहन्छ, र यहाँ मुद्दाहरूको संख्या छ। जानिजानि गरिब गुणस्तर वस्तुहरू खरीद गर्ने समय (र यो यो बेल्ट र रोलर्स), को अर्थव्यवस्था, याद भने किनभने गिरावट को परिवर्तन अन्तरालहरू, साथै मूल्य कि गर्नुहोस्। उदाहरणका लागि, यदि इन्जिन "AvtoVAZ" बेल्ट मा मानक हरेक 30-50 हजार किलोमिटर, त्यसपछि सस्तो र नकल गर्नेवाला घटक केही 5-10 अधिक हजार किलोमिटर प्राप्त गर्न व्यवस्थित गर्ने प्रतिस्थापित हुनुपर्छ। केही मिलाउने विशेषज्ञहरु पनि उहाँले दिन सक्छ के भन्दा बढी इन्जिन र सबै देखि पुन: प्राप्त गर्न प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। अक्सर मोटर्स कंप्रेशर्स संग सुसज्जित छन्। तर, इन्जिन मा भागहरु र सम्मेलन को सबै भन्दा यस्तो भार लागि डिजाइन गरिएको छैन। इन्जिन 7-9 हजार पालैपालो को दायरामा लामो काम गर्न सक्दैन। यो यस्तो प्रयोग र समय को संयन्त्र लागि डिजाइन गरिएको छैन - सधैं weakest लिंक बिग्रेको छ। र यो एक बेल्ट छ। र तपाईं पैसा बचत गर्न चाहनुहुन्छ जब के गर्न र एकै समयमा ढिलो जाने छैन? यो अवस्था बाहिर प्राप्त गर्न "प्राथमिकता" गर्न पिस्टन bezvtykovye स्थापना गर्न छ।
सुरक्षा संयन्त्र को स्थापना को लाभ
पनि अनुभवहीन मोटर चालकहरुलाई पिस्टन bezvtykovymi प्रणाली थप सुरक्षित र हार्डी हुनेछ भनेर थाह छ। बेल्ट फुट्छ भने पनि, उपरि कैंषफ्ट बस रोक्न। पिस्टन को क्रैन्कशाफ्ट को कार्य गरेर तलबाट उत्प्रेरित गर्छ। bezvtykovye पिस्टन "Priora" स्थापित भने, प्रकोप हुन भएन। को वाल्व को नाली मा समावेश गरिनेछ र बाङ्गो छैन। बेल्ट भङ्ग भने पनि कार सेवा स्टेशन गर्न ओसारपसार गरिनेछ। यो एउटा ठूलो फाइदा छ।
मोटर्स को एक किसिम सिर्जना प्रक्रिया मा, अगाडि-ड्राइव मोडेल डिजाइनर र ईन्जिनियरहरु लागि "AvtoVAZ" सुरुमा एक पिस्टन जस्तै सिर्जना गरियो। "Priora" bezvtykovye grooves कारखाना (पहिले संस्करण मा) बाट पहिले नै भएको थियो। प्रायजसो तिनीहरूले इन्जिन VAZ दशौं परिवार मा पाउन सकिन्छ। यो एक श्रृंखला को सट्टा एक बेल्ट प्रयोग कारण थियो। पिस्टन सुविधा यदि सम्भव छ भने, इन्जिन कि धेरै छ, शक्ति को एक अतिरिक्त 5-7 प्रतिशत कमाइहाले। bezvtykovye क्षमता मा "Priore" मा प्रतिस्थापन पिस्टन वृद्धि छैन। यो केवल महंगी मरम्मत विरुद्ध सुरक्षा। को खन्नु बनाउन, यो सतह पर्याप्त बाक्लो छ कि आवश्यक छ। पिस्टन शक्ति लिन्छ कि भारी बनाउँछ। नाली पनि unsatisfactorily को दहनशील मिश्रण को सङ्कुचन असर गर्छ। यो पनि शक्ति असर गर्छ। फलस्वरूप, तपाईं यस्तो विवरण मा कार सेट भने, इन्जिन शक्ति को 5-7% हराउछ। इन्जिन 150 लिटर लागि। एक। 10.5 लिटर छ। को, धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यो के पहिले नै कार पिस्टन bezvtykovye "Priora" मा आफूलाई स्थापित भएकाहरूलाई द्वारा लिखित छ। समीक्षा शक्ति खपत कम गर्न बाहेक वृद्धि, भनेर संकेत गर्छ। कारण असमान वजन वितरण गर्न धडाका बढ्छ।
"Priory छ" को लागि पिस्टन को निर्माता
त्यसैले कार मालिक आफूलाई जोगाउन निर्णय र सुरक्षित पिस्टन स्थापना बारे सोच। का बिक्री पिस्टन bezvtykovye राम्रो छ जो किन्न र स्थापना गर्न "प्राथमिकता", मा के हेरौं।
यी उत्पादनहरू तातो अहम प्रविधिले Togliatti मा निर्मित छन्। पहिले नै सुसज्जित छन् जसले इन्जिन घटक एकदम दक्षता र इन्जिन शक्ति कम ती को समीक्षा द्वारा न्याय। यो सङ्कुचन एक कम डिग्री र सिलेंडर को ठूलो आकार द्वारा बताए गर्न सकिन्छ। धेरै गहिरो अन्तर्गत वाल्व नमूना। यस मिश्र धातु को कम सिलिकन सामग्री सबै भन्दा राम्रो तरिका बल विशेषताहरु असर छैन। न्यूनतम निकल सामग्री स्रोत कम गर्छ। यस मामला मा, जाली पिस्टन को एसटीआई देखि महंगा छन्।
पिस्टन bezvtykovye एसटीसी "Priora" समारा उत्पादन। नियमित पिस्टन देखि वस्तुतः अप्रभेद्य यी उत्पादनहरु को विशेषताहरु। गहिरो पर्याप्त नमूना। मालिकहरूले समय बेल्ट विफलता नतिजा बारे चिन्ता हुन सक्छ। कमीकमजोरी बीच एक उच्च वजन आवंटित गर्न सम्भव छ। यो विसर्जन को गतिशीलता असर गर्छ। तर पर्याप्त लागत निर्णय कारक छनौट गर्दा हो।
तसर्थ, यो सुरक्षित पिस्टन धेरै लाभ छ कि देखेको छ। यी लाभ अकाट्य छन्। यो मोडेल को एक कार हरेक मालिक "प्राथमिकता" गर्न पिस्टन bezvtykovye स्थापित गर्न हो। तपाईं कुन छान्ने लक्ष्य र उद्देश्य मा निर्भर गर्दछ। तपाईं मजबूती र inexpensively, यो एसटीसी वा युक्रेनी "AVTRAMAT" गर्न आवश्यक छ भने। तर, बोट Kharkov मा उत्पादन बन्द र लगभग सबै स्टक कारोबार। एक एसटीआई आफ्नो पैसा लायक छैन, समीक्षा भन्छन्।
फोर्ड Scorpio: प्राविधिक विनिर्देशों, वर्णन र कार बारेमा रोचक तथ्य
परिवार र व्यापार यात्राको लागि ठूलो कार - फिएट Doblo समीक्षाएँ!
पटरिहरु मा घर ATVs के हुन् र तिनीहरूलाई बनाउँछ जसले?
पाङ्ग्रा कसरी जाँच गर्न दिइरहेका? व्हील असर को उपयोगिता कसरी जाँच गर्ने?
"निसान maxima": समीक्षा। निसान maxima: मूल्य, सुविधाहरू
Shcherbinka चिहान - मास्को मा सबै भन्दा ठूलो दफन साइटहरू मध्ये
माछा मार्ने गाँठ "गाजर"। चरण विवरण द्वारा चरण
को विवरण प्रयोगको लागि निर्देशन,: दबाइ "tazepam"
Xanthe Resort5* (साइड, टर्की): समीक्षा, वर्णन र फोटो
तपाईं प्रणाली एकाइ भेला हुनु आवश्यक के
तपाईं आफूलाई निकाल्न हुनेछ क्षेत्रको लागि पानी: राम्रो तरिकाले ड्रिल आफ्नो हातले
"Trimetazidine-Biocom एमवी": प्रयोग, संरचना, analogs र समीक्षा लागि निर्देशन
Glinka संग्रहालय Fadeev। संगीत संस्कृति को संग्रहालय। Glinka
भोग - पाप गर्न अनुमति?
खिडकियों मा चिन्तनशील फिलिम: विवरण, लाभ, आवेदन विधिहरू